Strategy First University SFU Professional Diploma in Logistics and Supply Chain Management – Strategy First University
SFU Professional Diploma in
ဒီဇင်ဘာလ တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် SFU Professional Diploma in Marketing and Brand Management (Online) သင်ကြားမည့်ဆရာ၊ သင်တန်းချိန်
Class Code : SFU-BMBM-02-01​
Lecturer : U Aung Chit Khin – Founder & President, MBA (Nottingham), PG Dip M, Dip M (CIM, UK
U Aung Pyae, Myanmar Country Head (True Digital Group) ,MSc. Marketing (Heriot Watt University)
Online Video Starting Date : 26 Dec 2021​
ZOOM Starting Date : 2-Jan-2022​
Day and Time : Sunday (6:00 pm to 8:30 pm)​
Duration :6months ​
Module 1 – Logistics Management
Module2– Distribution Management
Module3– Purchasing & Supply Chain Management
Module4– Ethics & Contemporary Issues in Supply Chain Management
မူရင်းသင်တန်းကြေး – ၆၉၅,၀၀၀ ကျပ်
ယခု Online သင်တန်းကြေး – ၃၉၅,၀၀၀ ကျပ်
* Referral Discount – ၃၀၀၀၀ ကျပ် (Save)
(ကျောင်းသား၊သူဟောင်းများ အနေဖြင့် အတန်းတက်ရောက်လိုသည့် မိမိသူငယ်ချင်းများကို Refer ပေးပြီး Referral Discount အနေဖြင့် SFUx Certificate in Business English အတန်းကို အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်)
ICM ကျောင်းသား၊သူ ဟောင်းများအတွက် သင်တန်းကြေး – ၂၉၅,၀၀၀ ကျပ် (ကိုဗစ်ကာလ အထူးနှုန်း)
ICM Mktgm Old Student – ၁၉၅၀၀၀ ကျပ် (ကိုဗစ်ကာလ အထူးနှုန်း)
SFUx ကျောင်းသားများအတွက် SFU_SQA Professional Diploma တက်ရောက်ပါက ဆက်စပ်ဘာသာရပ်အလိုက် Discount ရရှိပါမည်။
ဘာသာရပ်တူ တက်ရောက်ထားသည့် ကျောင်းသား၊သူဟောင်းများ အတွက် သင်တန်းကြေး ထပ်မံ ပေးသွင်းရန် မလိုဘဲ Program Registration Fees – ၁၀၀၀၀ ကျပ် သာပေးသွင်းရမည် ဖြစ်သည်။​
*သင်တန်းကြေးများကို အရစ်ကျ (၄)ကြိမ်အရစ်ကျခွဲသွင်းနိုင်ပါသည်။​
သင်တန်းကြေးကို တစ်ခါတည်းပေးသွင်းပါက Cash Down (5%) Discount ရရှိပါမည်။​
သင်တန်းကြေးကို အထူး အဆင်ပြေသော Online ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည့်​
Mobile Banking (AYA, KBZ, CB, Yoma ) များဖြင့် လွယ်ကူစွာပေးသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။​
Lecturer : Capt, U Aung Khin Myint – Chairman, Global Multimodal Transport And Services Co. Ltd, Master Mariner (Ministry of Transport), Representative, American President Line (APL) Logistics, EMBA (YIE), Dip in Shipping and Port Mgt, Dip in Mgt & Administration
Lecturer : Capt. U Win Naing Nyunt, Warehouse Safety Consultant, Certified Trainer for FIATA, International Freight Forwarding Association Diploma, Certified Trainer for Behaviour Base Safety
Lecturer : Dr.U Aung Ko Ko – M.Sc HRM(Edinurgh Business School, Heriot-Watt University UK), M.B.,B.S (University of Medicine 2,Yangon)
Logistics Management ဆိုတာ Organization တစ်ခုလုံးနဲ့ မားကတ်တင်း channel တွေရဲ့ မဟာဗျုဟာကျကျ ကုန်ပစ္စည်း များ ဝယ်ယူခြင်း ကစပြီး ကုန်ပစ္စည်းများ လည်ပတ်စီးဆင်းမှုနဲ့ ထုတ်ပိုး သိမ်းဆည်းမှုဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့် လုပ်ငန်းများကို စီမံကွပ်ကဲခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Supply Chain Management ကတော့ ကုန်ကြမ်းတွေကို ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ Supplier တွေကစပြီး သုံးစွဲသူတွေဆီရောက်တဲ့အထိ ပါဝင်တဲ့ ကြားခံကွန်ယက် များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Logistics & Supply Chain Management မှာ အခန်းကဏ္ဍ ပေါင်းများစွာပါဝင်ပြီး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်း၊ ကုန်ကြမ်းများဆိုင်ရာ စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးရတဲ့အပိုင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများကိုလက်လီလက်ကားဖြန့်ဝေခြင်း ၊ကုန်ပစ္စည်း စာရင်းပြုစုခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်းနဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်မှာ ကုန်ကျစရိတ်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်းစတဲ့ အခန်းကဏ္ တွေကိုလေ့လာ ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Logistics နှင့် Stock ပိုင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းတွေမှာ လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ မန်နေဂျာများ၊ Trading၊ export နှင့် import Warehousing စ တဲ့ အပိုင်းမှာလုပ်ကိုင်နေသူများ တက်ရောက်သင့်တဲ့ program တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာရပ်တွင် အသေးစိတ်သင်ကြားရမည့် ခေါင်းစဉ်များမှာ
– Role of logistics in the economy and organizations
– Nature and different objectives of logistics
– Value creation for customers
– Logistics management tools
– Different aspects, challenges and issue in global
– Coordination between logistics and other departments
– Role of 3PLs, 4PLs and logistic partners
– Basic concept of supply chain
– Upstream and downstream supply chain processes
– Critical issues affecting customer needs
– Importance of sourcing, procurement and global
– Role of different stakeholders in supply chain
– Role of distribution in managing supply chains
– Distribution functions
– Inbound & outbound
– Different channels of distribution and their application
– Warehouse and inventory management tools and
– Value Creation in distribution
– Metrics in distribution
– CSR practices
– Role of contemporary issues in business
– Ethical issues in supply chain management
– Green Supply chain
– Importance of sustainability through the supply chain